युगपत्रबुल मार्केट - युगपत्र
२०७८ आश्विन १३, बुधबार
बुल मार्केट भनेको के हो ?
बुल मार्केट एक वित्तीय बजारको अवस्था हो जहाँ मूल्य बढ्दै जाने वा बढ्ने आशा गरिन्छ ।” बुल बजार” शब्दको प्रयोग प्राय: शेयर बजारको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ तर उक्त शब्दको प्रयोग व्यापार हुने सबै कुराको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै ब्यान्ड, अचल सम्पत्ति, मुद्राहरु, र कमोडिटीहरुका लागि।
धितोपत्रहरुको मूल्य घट्ने र बढ्ने भई रहन्छ तेसैले “बुल मार्केट” शब्दको प्रयोग लामो समयसम्म धितोपत्रको मूल्यमा वृद्धि भएको खण्डमा प्रयोग गरिन्छ। बुल मार्केटको अवधि केहि महिना देखि लिएर वर्ष दिनसम्मको पनि हुने गरेको छ।
बुल मार्केटको बुझाई
बुल मार्केटको मुख्य विशेषतामा आशावाद, लगानीकर्ताको विश्वास र लामो समयसम्म राम्रो नतिजा आउने अपेक्षा पर्दछन। मार्केटको प्रवृति अलिक चन्चल रहेका कारण यस विषयमा भविष्यवाणी गर्न कठिन हुने कुराअध्धयनले देखाएको छ। भविष्यवाणी गर्नका निमित्त क्रेता र विक्रेताको मनोविज्ञान तथा विभिन्न समयमा सरकारल लिएर आउने नीति र कार्यक्रमले पनि प्रभाव पार्दछ । हालसम्मको बजारको अध्यन गर्दा सन् २००३ देखि २००७ सम्मको अवधिलाई विश्वमा बुल मार्केटको अवधि भनी पहिचान गरीन्छ जसको अन्त्य २००८ मा सुरु भएको आर्थिक मंदिले गर्यो।
बुल बजारको विशेषता
सामान्यतया बुल बजार अर्थव्यवस्था अगाडी देखि नै बलियो हुदा हुने गर्दछ। कर्पोरेट मुनाफामा वृद्धि, बेरोजगारीमा कमी र घरेलु उत्पादन (जीडीपी)मा वृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुन्छ। बुल अवधिको समयमा लगानीकर्ताको माग पनि सकारात्मक नै हुने गर्दछ र कम्पनीको आईपिओ निस्काशनमा पनि तीव्रता आउने गर्दछ।
माथि उल्लेख गरेको मापकहरुमा मात्रात्मक मापक धेरै छन् जसमा बेरोजगारीमा कमी र कर्पोरेट मुनाफामा वृद्धि रहेको छ। बुल मार्केट रहेको क्रममा शेयर किन्ने मानिसहरुको संख्या धेरै र यसलाई बिक्रि गर्ने मानिसको संख्या कम हुन्छ। यसमा लगानीकर्ताहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित हुन्छन।
मूल्य वृद्धि हुदा किन बुल मार्केट भनिन्छ ?
बजार माथि जादा “बुल” र बजार ओरालो लाग्दा “बियर” शब्दको प्रयोग गरिन्छ यो बहसको विषय हो। “बुल”ले र “बियर”ले आक्रमण गर्ने तरिकालाई लिएर नै बजारको अवस्थाको नामाकरण गरिएको छ । उदाहरणको लागि जब बुलले आक्रमण गर्ने गर्दछ तब आफ्नो सिङ्गलाई हावामा उफारी आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई माथि उफार्छ र भालुले चाहिँ हातको आक्रमणका माध्यमबाट प्रतिद्वन्दीलाई जमिनमुनि धसाउने गर्दछ। यी कुरालाई नै आधार मानेर बजार माथि जादा बुल मार्केट र बजार ओरालो लाग्दा बियर मार्केट भन्ने गरेको पाइन्छ।
के अहिले हामी बुल मार्केटमा छौ ?
सामान्यता बजारमा शेयरको मूल्यमा २०%ले वृद्धि हुने गरेको खण्डमा उक्त बजारलाई बुल मार्केट भनिन्छ। सन् २००८ सालमा जुन स्तरको आर्थिक मन्दीले बजारलाई प्रभाव परेको थियो त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने केहि हदसम्म बजार बुल हुन खोजेको हो कि भन्ने त देखिन्छ तर हाल चिनिया कम्पनीको समाचार बाहिरिएसँगै सर्वसाधरणमा उत्पन्न भएको भयको कारणले गर्दा बजार कतै फेरी नकारात्मक त हुने होइन विश्लेषकहरु बताउछन्।
बुल बजारमा के कारणले गर्दा शेयरको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ ?
बुल बजार भएको अवस्थामा अर्थव्यवस्था सबल र उकालो लाग्दो अवस्था हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। सो सँगै लगानीकर्ताहरुमा शेयरको मुल्यमा वृद्धि हुने आशा हुन्छ जसले बजारमा तरलताको प्रवाहलाई अझ बलियो बनाई दिन्छ। बलियो उत्पादन अर्थव्यवस्था, उच्च रोजगार, र बढ्दो जीडीपी सबैले नाफाको तर्फ संकेत गर्दछ जसको प्रतिबिम्ब शेयरको मूल्य वृद्धि मार्फत देखिन्छ। बैंकहरुको बचतमा कम ब्याज दर र सरकारको नीतिमा उद्योगको कर कम भएको खण्डमा शेयरको मूल्यमा वृद्धि हुने निश्चित हुन्छ।
बुल मार्केट ढल्ने र बियर मार्केट किन बन्छन ?
जब अर्थव्यवस्थाको गति मन्द हुन्छ र बेरोजगारीमा वृद्धि हुन्छ तब लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा पनि सोहि अनुसारको प्रभाव पार्दछ र बजारमा शेयरको मागभन्दा बढी पूर्तिको अवस्था निर्माण गर्दछ जसका कारणले गर्दा बजार नकारात्मक भई बियर मार्केटको सिर्जना हुन जान्छ ।
प्रकाशित : २०७८ आश्विन १३, बुधबार
दशैं विरोधीले यसरी मनाउँछन् दशैं
कपूतन्त्र भनेको के हो ?
विजयीभावका साथ संगठित बनौँ
मिडिया प्रभावको सैद्धान्तिक आयाम
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा पश्चिमीकरण र विपश्चिमीकरण : सञ्चार विधाको सन्दर्भ
भूमिगत पानी पुन:भण्डारण र वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
छुवाछुत उन्मूलनमा जोसमनी सन्तहरूको योगदान
तल्लो जात र माथिल्लो जात होइन, वंशियार र अंशियार हौँ
अध्यक्ष : नुमनाथ प्याकुरेल